နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ပေါက်တတ်ကရ အိတ်တီ့ အပိုင်း (၁၀)
ပေါက်တတ်ကရ အိတ်တီ့ အပိုင်း (၁၀)
22 Jul 09, 19:22
Boyz: နှာသံနဲ့ သီချင်းဆိုတယ်ဆိုလို့ ဟိုးတုန်းက ရွာဘုရားပွဲတစ်ပွဲ ရောက်ဖူးတာ မှတ်မိတယ်။ အမှောင်ထဲက ချောင်မှာ ဝါးကျည်တောက်နဲ့ သီချင်းဆိုတာ အဲ့တုန်းက စာဥ သီိချင်း ခေတ်စားတုန်း။
22 Jul 09, 19:23
Boyz: ငါးဆန်ပြုတ်ကို ကြာကွေးနဲ့ ညှပ်စားနေတယ်။ ကြက်သားကုန်းဘောင် အစပ်ချက်နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနေပါတယ်။ မုဒိတာပွားကြပါကုန်။
22 Jul 09, 19:25
Boyz: ကြက်သားကုန်းဘောင်က နည်းနည်းစပ်တော့ ချွေးသီးချွေးပေါက်များ ကျနေတာပေါ့လေ။ ထမင်းစားလို မြိန်သဗျား။ ခင်ရာဆွေမျိုး မြိန်ရာ ဟင်းကောင်းဆိုတော့လဲ...။ လာစားလှည့်ပါဦး။
နှေညိုညို.. တှိမ်တောက်တဲ့အခှါ ရွာလှမ်းနှံဘေးမှာ....။ စှာဟုရေ.. ရွာအရောက်ပြန်ခဲ့ပှါ...။ အိုး.. ဟထိုးသံ သက်သက် ထည့်ဆိုသလား အောက်မေ့ရတယ်။
22 Jul 09, 19:26
Boyz: အသံကို ကြားကတည်းက မသင်္ကာလို့ သေချာ မီးမှိန်မှိန်အောက်မှာ သွားကြည့်တာ..။ ရော်.. ကြွေတော့မယ့် ပန်းနှယ်... ခမျာ... ကိုယ်ပျက်နေရှာတာကိုး...။ နှာခေါင်းက ပဲ့နေပြီ။ နှာနုရိုးများ မြင်နေရတယ်။
22 Jul 09, 19:27
Boyz: ကြက်သားက ဖွယ်တယ်တယ်နဲ့...။ ဒီကကြက်တွေကို မြန်မာကြက်လောက် ခံတွင်းမတွေ့တာ အမှန်ပဲ။ ဆန်ပြုတ်ကတော့ အတော်ပူသဗျား...။
22 Jul 09, 19:28
Boyz: လက်ဖမိုးတစ်ခုလုံးကို ပတ်တီးစီးထားတာ.. ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့။ လက်ချောင်းတွေက သုံးလေးချောင်းလားပဲ အကောင်းကျန်တော့တယ်။ ပြတ်ကုန်တာ။ ဘေးနားမှာတော့ သမီးလေး နှစ်ယောက် ဖင်ပူးတောင်းထောင်တမ်း ကစားနေကြတယ်။
22 Jul 09, 19:29
Boyz: ဒီမှာလဲ အီကြာကွေးကို အီကြာကွေးလို့ပဲ ခေါ်သဟ။ ပုံမှန် တစ်ခြမ်းပဲ ပေးတယ်။ အဲဒ့ါ အပို နှစ်ခု ထပ်ဝယ်လာတယ်။ တစ်ခု ငါးမူး။ နှစ်ခုတစ်ကျပ်။ မဆိုးဘူး။ စားလို့ကောင်းတယ်။ ယိုးဒယားငံပြာရည်နည်းနည်း ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။
22 Jul 09, 19:30
Boyz: သမီးလေးတွေက ရှိလှ ၃-၄ နှစ်ပေါ့။ ကျောင်းစိမ်း ဂါဝန်တွေ ညစ်ထေးထေးနဲ့။ အဖေလုပ်သူကတော့ သီချင်းဆိုရင်း ရှေ့က ဖြန့်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါ အနွမ်းလေးမှာ တစ်ဆယ်တန် ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးတွေ။ ဝါးကျည်တောင် တစ်ဒုံဒုံနဲ့..။
22 Jul 09, 19:32
Boyz: ဆန်ပြုတ်ကို ဘယ်လို အသံထွက်တာလဲဟင်။ congee ကို ကွန်းညီးလို့ ထွက်တာလား.. ကွန်ဂီးလို့ အသံထွက်တာလားဟင်။ တို့ကတော့ နံပါတ်စဉ်တပ်ထားတာ တွေ့တော့ နံပါတ်ပြောမှာတာပဲ။ အိဟောက်၊ အေ့ဟောက်၊ဆန်းဟောက်... ဟဲ. မိုက်တယ်။
22 Jul 09, 19:34
Boyz: သီချင်းဆိုတာတော့ မဆိုးဘူးဗျ။ ဆိုးတာက နှာသံပါနေတာ။ ရာတန် နှစ်ရွက် ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက ၉၄ လောက်ထင်ပါ့။ တောင်းစားတာချင်းတူတူ သီချင်းဆိုတောင်းစားတဲ့သူကို ပိုပေးဖြစ်တယ်။
22 Jul 09, 19:35
Boyz: ကြာကွေးကတော့ ကြာကွေးလို့ သိကြတယ်။ လဲန်ကေ့၊ ဆန်ကေ့ နှစ်ခု သုံးခု မှာလိုက်တယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ အဆင်မပြေတာ။ ကျသင့်ငွေပဲ။ တစ်ကျပ်နှစ်ကျပ်တွေက ရတယ်။ ပြားသုံးဆယ်တို့ ပြားခြောက်ဆယ်တို့ လာရင် သေရော။
22 Jul 09, 19:36
Boyz: ဆရာသမားက မခေဘူးဗျ။ သိုးမည်းတွေ ရတယ်။ လမ်းကြားထဲမှာ သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခိုးနမ်းတော့ အလစ်သုတ်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာက ပိုသိနိုင်မလား ဘာညာတွေ အသေဟဲတာ။ လူတွေ ဝိုင်းလို့ပေါ့ဗျာ။
22 Jul 09, 19:37
Boyz: ကြက်ကုန်းဘောင်ကြော်ကတော့ ပုံတွေ့လို့ လက်ညိုးထိုးမှာတာ။ ပုံက ၆ ပုံလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ဟင်းအမယ်တွေက ၂၅ မျိုးလောက်ကို တရုတ်စာတွေနဲ့ပဲ ရေးထားတယ်။ လောလောဆယ် ပုံထဲက ဟင်း၆မျိုးမအီသေးခင်တော့ အဆင်ပြေသေးတယ်
22 Jul 09, 19:38
Boyz: တစ်ခါ တစ်ခါ သူ့သမီးလေးတွေက ဝင်ဝင်ကကြတယ်။ တင်တွေ ဘာတွေ တွန့်ပြသေး။ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သဘောကျနေတာပေါ့လေ။ ခေတ်ပေါ် အလွမ်းအဆွေးတင်မက မိုနို မြန်မာသံတွေပါ ရတယ်ဗျ။
22 Jul 09, 19:40
Boyz: တရုတ်စာတွေနဲ့ ရေးထားတာတွေကတော့ နောက်မှ တစ်ခုချင်း လက်ညိုးထိုးပြပြီး ဝယ်စားကြည့်ရမယ်။ အခုတစ်လော ဓါတ်ပြတ်နေတော့ ထမင်းဟင်း မချက်စားချင်တော့ဘူး။ ဝယ်စားတာလဲ စိတ်တိုင်း သိပ်ကျတာ မဟုတ်ဘူး။
22 Jul 09, 19:41
Boyz: မောင့်အချစ်က ပိုတာ ဘကြီးအောင် ညာသွားလို့ ရွှေရုပ်လိုချင်တဲ့ အထိ... သဲပွင့်လေးထဲမှာ ဆပ်ပြာကုန်းကောက်လို့ -င်ပေါ်တဲ့ သီချင်း အဆုံး...။ အံမယ် ကိုယ့်ဆရာက စိုင်းဆိုင်မောဝ်ပါ ဟစ်သေးသဗျ။
22 Jul 09, 19:42
Boyz: ပင်နီစူလားအထိ သွားစားရအောင် ဆိုတာကလဲ အသွားအပြန်နဲ့တင် ဗိုက်က ချောင်နေပါပြီဗျာ။ အသွား နာရီဝက် အပြန် နာရီဝက် အနည်းဆုံး စီးရတယ်။ ရနံ့သစ်၊ ရွှေတြိဂံ၊ လွိုင်နိုင်း၊ အင်းလေး အဆင်ပြေပါတယ်။
22 Jul 09, 19:43
Boyz: မေရယ် အထင်တော့ မလွဲလိုက်နဲ့ဦး စာလွှာများ ရောက်မလာခဲ့ရင် မောင့်အပေါ်မှာ မငြိုငြင်ပါနဲ့နော်။ အစ်ကိုလို စစ်သားဘဝဟာ ချစ်သူကို လွမ်းဖို့ရာ ဆိုပြီး ဟဲလိုက်ရင် xxxxx ဝတ် ကိုကိုများ သဘောကျလို့ ဆုချီးမြင့်သဗျား။
(ကျန်တာကို နောက်ပိုင်း အော်ပဒါ ဇာတ်ထုတ် ကပြတဲ့ အချိန်မှာပဲ ရှုစားနားသောတ ဆင်တော်မူကြပါ ပိတ်သတ်ကြီးတို့။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:44 PM
maylay July 23, 2009 at 12:03 AM
ကိုကြီးက အဟုတ်တင်လိုက်တာပဲ အမှတ်တရပေါ့နော် ကောင်းတယ် ညလေး အရင်ဆုံးလာဖတ်တယ်နော် ဆက်ရန်ကိုစောင့်မယ်
KTz July 23, 2009 at 2:28 AM
ummm.. i think ya should label as "Combination of Karaoke n Congee"
Gd day :)
khin oo may July 23, 2009 at 6:26 AM
tz July 23, 2009 at 10:33 AM
hybrid post (ကြာကွေး & နှာကွေး?? ဘယ်လိုသုံးရပါ့)
စားရင်းနဲ့များ သတိရတတ်ပလေ မျက်စိထဲကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် :)
ksanchaung July 23, 2009 at 11:50 AM
Post-modern တွေလား။ Surrealism တွေလား။ တခုခုပဲ။ တခေါက်တည်းနဲ့ နားမလည်ဘူး။ သေချာဖတ်မှ။
rose of sharon July 23, 2009 at 5:19 PM
ဟိုသားအဖတွေကမြန်မာပြည်က ဆန်ပြုတ်ကစကာင်္ပူက အဲလိုနားလည်တယ် ဟုတ်လား ဆက်ရန်မျှော်နေမယ်
Rita July 25, 2009 at 4:27 PM
ပေါက်တတ်ကရ အိတ်တီ့ အပိုင်း (၉)
Starhub : Internet on Mobile အကြောင်း သိကောင်းစရာ။...
IRC Chat မှ ဟာသများ (၃)
IRC Chat မှ ဟာသများ (၂)
Bangkok Trip9နတ်မိမယ်တို့ ပျော်စံရာ (၉)
FireFox 3.5 Official Release (Finally!)